နို့သို့မဟုတ်ဂလာလီတစ်မှပလတ်စတစ်လုပ်နည်း - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> အိမ်လုပ်စမ်းသပ်ချက် >> နို့သို့မဟုတ် Galalith မှပလပ်စတစ်လုပ်နည်း
နို့သို့မဟုတ် Galalith မှပလပ်စတစ်လုပ်နည်း
Este စမ်းသပ်မှု ဒါလွန်စွာရိုးရှင်းပါသည်။ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာမှာပလတ်စတစ်မဟုတ်သော်လည်းကာဇိုင်း၊ နို့ပရိုတင်းဖြစ်သည် စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်သည်ပလပ်စတစ်တစ်ခုနှင့်တူသည် ;) Bioplastic လို့ခေါ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။
သိချင်စိတ်တစ်ခုအနေနှင့်ဤပစ္စည်းသည် ၁၈၉၈ ခုနှစ်တွင်မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ပြီးနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်မှတ်သားပါ ခိုခို Chanel ငါ«ကိုသုံးလိမ့်မယ်နို့ကျောက်»သို့မဟုတ်သူတို့အဘို့အ Galalith စိတ်ကူးယဉ်ရတနာ.
ဂယ်လလိတ်အားပေးသောအခြားအမည်များမှာဂယ်လာလီ၊ နို့ကျောက်၊ နို့ကျောက်။
ရှလကာရည်၏4လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
အစားအစာအရောင် (optional ကို)
ကျနော်တို့ရှလကာရည်ထည့်ပြီး 1 မိနစ်နှိုးဆော်။
ပြီးပြီ !! ငါတို့ကနို့ကို colander ထဲထည့်လိုက်တယ်။
သို့သော်သူမနောက်လိုက်ခြင်းသည်ရလဒ်ကောင်းများမရရှိပါ။ အနည်းဆုံး Coco Chanel အတွက်ရတနာရရန်မျှော်လင့်ထားသူများမဟုတ်ပါ။
ငါ Galalith သို့မဟုတ်နို့ပလပ်စတစ်များအတွက်စာရွက်စမ်းသပ်ခဲ့ကြပြီးရလဒ်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်စရာပါပြီ။
ရှင်းနေသည်မှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုညှိခြင်းနှင့်သော့သို့မဟုတ်လှည့်ကွက်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအပိုင်းအစများကိုရရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်မတူပါ။
အဆိုပါစာရွက် commented ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ငါနို့ကိုအပူပေးပြီးပွက်ပွက်ဆူနေသောမီတစ်ခွက်တွင်ထည့်ပြီးအစားအစာအရောင်တင်ခြင်းနှင့်အချို့သောရှလကာရည်များထည့်ပြီးပြီ။ အခုံးများသည်ချက်ချင်းပင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်၊ ကာဇိုင်း (paste) မှကာဇိုင်း (paste) မှခေါက်ဆွဲများ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သာမန်စစ်စစ်ကိုအသုံးပြုပါက၊ ပိုကောင်းတဲ့အရေအတွက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်ငါတို့ကိုပိုကောင်းတဲ့ရေထုတ်ပစ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုသောထည်တစ် ဦး တရုတ် strainer, ပိုကောင်းတဲ့။
အစားအစာအရောင်နှင့်အတူအရောင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, တစ် ဦး မှို၌ထားခဲ့ပါ။
ပလတ်စတစ်ကိုသွင်းလိုက်သောအပိုင်းအစများသည်ကွဲထွက်သွားသည်။ ပုံထဲမှာတ ဦး တည်းလိုပဲ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါအချို့ဖိအားလျှောက်ထားရှိရာအပိုင်းပိုင်းအတွက်, ရလဒ်တွေအများကြီးပိုကောင်းခဲ့ကြပြီ။
တစ် ဦး ကတင်းကျပ်ပြီးအလင်းပလပ်စတစ်အကြွင်းအကျန်။ တစ်ပတ်အကြာတွင်၎င်းသည် "ရေနံ" ကိုထုတ်လွှတ်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းထိခိုက်လွယ်မှုကိုခံစားနေရသော်လည်းဤအရည်အသွေးနှင့်အတူတစ်ခုခုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏အပိုင်းအစများတွင်ရှလကာရည်၏အနံ့သည်အလွဲသုံးစားမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်မှာ Galalith သည်အနံ့မရှိဟုထင်ရသည်
ပိုကောင်းတဲ့ casein ထံမှရေခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်အပိုင်းပိုင်းဖိအားလျှောက်ထား။
အပိုင်းကိုအပြီးသတ်နှင့်ဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ရှုရန် formaldehyde ကိုအသုံးပြုပါ
ကာဇိုင်းသည်ရေနှင့်အက်ဆစ်များတွင်ပျော်ဝင်နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းတို့နှင့်သို့မဟုတ်အယ်ကာလီများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ကွဲအက်စေနိုင်သည် ၎င်းသည်အနံ့မရှိသော၊ ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်စွမ်းမရှိသော၊ မတည့်မှု၊ antistatic နှင့်လက်တွေ့ကျသောလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိသော (လေထဲတွင်ဖြည်းဖြည်းနှင့်တောက်ပစွာလောင်ကျွမ်းနိုင်သော်လည်းမီးလျှံ၏အရင်းအမြစ်ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်မီးလောင်ကျွမ်းသည်။ ဆံပင်၏လောင်သောအနံ့နှင့်လောင်ကျွမ်းသည်) ။
Dino Buzzati မှတာတာရာသဲကန္တာရ
Tabula ကို PDF မှ Excel သို့ CSV သို့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
ဘုံလေယာဉ် (Delichon urbicum)
၁၈ မှတ်ချက်များ "နို့နှင့်ဂယ်လိတ်မှပလပ်စတစ်ပြုလုပ်နည်း"
7:2010 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 7, 34
အဘယ်အရာမျှမပျက်ကွက်, ကြေကွဲအပြင်ကပုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငါအတွက်တကယ်ပလတ်စတစ်နဲ့မတူဘူး။
2:2011 pm မှာဇန်နဝါရီလ 5, 35
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောကြားလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့တွင်ရလဒ်များမရှိသေးသောစမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်ပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံ ပြန်၍ ရေးပါမည်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီစမ်းသပ်မှုကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တော်တော်များများမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ , စပိန်အတွက်ငါသာဒီမှာ post ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတွေ့ခဲ့သည့်ဗားရှင်းများတွင်နို့ကို (ဆူအောင်မထည့်ဘဲ) အပူပေးသည်။ သူတို့သည်ပတ်ပတ်လည်နှင့်လှည့်ပတ်သွားကြသည်။ ရှလကာရည်ကိုတဖြည်းဖြည်းဖြည့်စွက်ပြီး၎င်းကိုပြုလုပ်ပေးသည်ဆိုသောအချက်မှာနို့သည်အဖုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ဖြစ်နိုင်သမျှအရည်များကိုဖယ်ရှားရန်၊ စစ်ထုတ် (လက်ဖြင့်သို့မဟုတ်မှို) တွင်ကျန်ရှိနေသောမုန့်စိမ်း (ကာစီနို) ဖြင့်ပုံသဏ္makeာန်ပြုလုပ်ရန်နှင့်နွေးထွေးသောနေရာတွင်ထွက်ခွာရန်ပိုကောင်းသည့်အထည်သို့မဟုတ် filter တစ်ခုကိုအသုံးပြုပါ။ အချို့လူများက၎င်းကိုရေဒီယိုဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်ထားကြပါသည်။ မုန့်ဖုတ်ခြင်းသည်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်မရှိသည်ကိုမသိပါ။ @ _ @ အရောင်များအတွက်၎င်းသည်ကြေးနီဆာလဖိတ်၊ ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်စသည်တို့ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုထားသည် (ဤတွင်စာရွက်စာတမ်းပါရှိသော်လည်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) http://facstaff.bloomu.edu/mpugh/Experiment%2011.pdf (google Translator?) နှင့်နိမ့်ဆုံးကိုရှင်းလင်းနိုင်သည့်ဗွီဒီယို - http://www.metacafe.com/watch/310971/how_to_make_plastic_at_home_from_milk/ သံသယများစွာနဲ့စိတ်မကောင်းစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့တဲ့အခါငါမကူညီဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်သည်။
ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်၊
ကောင်းပြီ၊ Galalith ဆွေးနွေးပွဲ၏ဓာတ်ပုံကိုကြည့်။ မရသည့်အတွက်မည်မျှစိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်¬¬။ ငါ "ပလပ်စတစ်" ကိုရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်ထားရန်သည်းခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သုံးရက်ခန့်ထားခဲ့သည်။ ငါလုပ်သောမှိုသည် (၂ စင်တီမီတာခန့်) ထူပြီးထူထဲနေသည်ကိုငါရှင်းလင်းရန်လည်းလိုအပ်သည်။ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်တွင်အချိန်တိုလေးနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြတ်တောက်စေခြင်းမှာ၎င်းသည်သဘာဝအပူသို့မဟုတ်ရေတိုင်ကီတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်းရလဒ်မှာ၎င်း၏ထူးခြားသော cookie တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏အတွင်းပိုင်းလေပူဖောင်းများပါရှိသော်လည်း၎င်းသည်မပါဝင်ပါ။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုပလပ်စတစ်နဲ့တူတယ်၊ အဲဒါကငါပိုကောင်းတဲ့အမြတ်ထုတ်မှုအချက်အလက်တွေကိုရှာမတွေ့ဘူးဆိုတာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။ အသုံးမကျတဲ့အကူအညီအတွက်တောင်းပန်ပါတယ် မင်္ဂလာပါ
10:2011 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 4, 47
16:2011 pm မှာဇွန်လ 6, 15
အရမ်းလွယ်တယ် .... အကယ်၍ သင်သည်၎င်းကိုမချိုးလိုလျှင်၎င်းသည် 20kg / cm2 အလေးချိန်ရှိပြီး၎င်းကိုဖြစ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးခြောက်သွေ့စေရမည်
စက်တင်ဘာလ 14, 2011 တွင် 2:07 pm မှာ
မင်းကိုပြောပြနိုင်မလား ဘာလိုအပ်တယ် တည်ဆောက်ရန် စက်ရုံငယ်လေး ကတ်များ ဂါလလိပြည်?
သင်သိလား တချို့အရာတွေ သူ့အကြောင်းကို?
ငါနို့အမျိုးအစားများစွာနဲ့အတူလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါအတွက်အများဆုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့တာကတော့ပဲနို့နဲ့အတူတူပဲ။ သူတို့က ၂ ရက်အနားယူရတယ်။
ဟိုဆေး Murillo Corral
6:2020 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 4, 03
လူကြီးလူကောင်း - ခင်ဗျားလုပ်ခဲ့တာကဒိန်ခဲလုပ်တာနဲ့တူတယ်။ ကာဇိုင်းဟာဒိန်ခဲရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းအပြင်နို့ရဲ့သဘာဝအဆီဖြစ်တာကြောင့်ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးပလတ်စတစ်နဲ့တူတယ်။ အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။
12:2020 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 1, 46
ဒါက vulgar «ဒိန်ခဲ»ပါ။ ပေါင်မုန့်ကိုပိုကောင်းအောင်ထည့်ပြီးအရသာကောင်းကောင်းစားပါ။
2 Galalith လုပ်နေတာပထမစမ်းသပ်မှု
4 casein ၏ဂုဏ်သတ္တိများ